Rewghasa na Anchor
Waya nwere ogwu na aguba waya
Gịnị bụ ụdị nke nkịtị tie Yi network nchebe?
site ha na 20-07-02
1. Frame guardrail net A na-akpọkwa ụgbụ nchekwa net ahụ “ụdị etiti mgbochi mgbochi ịgbado ọkụ net net”, “etiti mwepu iche” na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ nzukọ nke ngwaahịa na-agbanwe agbanwe, nke na-ewu ewu na-ewu ewu n'ọtụtụ ebe, na-ewu ewu karịa netwọọdụ izugbe, ...
Ngwa akporo nke waya nchebe net
Waya nwere ogwu, nke a makwaara dị ka netịl na-agbachi net, ụgbụ kewapụrụ iche, waya ntanetị. Ọ bụ usoro nchekwa, mara mma, nchebe gburugburu ebe obibi, nke bara uru na ụdị ntanetị ọhụrụ. Waya ntupu ihe onwunwe na-welded na elu àgwà carbon ígwè waya, nhazi ọkwa site n'elu ọgwụgwọ: nwa waya protectiv ...
Waya nwere ogwu na-ewu ụlọ ọrụ mmepe
Ugbu a ụlọ ọrụ na-ewu ihe emepewo ngwa ngwa. Fọdụ nnukwu ndị mmepe ụlọ na-eji usoro ọhụụ ọhụrụ na ụlọ ndị dị elu, ebe obibi na ebe ndị ọzọ. Iji ojiji nke ụgbụ owuwu, waya nwere ogwu na ụgbụ ndị ọzọ iji dochie akwụkwọ ntuziaka nke rebar ejirila na ...
Right Copyright - 2019-2020: All Rights echekwabara. Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - Sitemap